Inkukhu yokukhusela i-Pox I-Pox vaccinated China Manufacturer
Iimveliso zeeMveliso zeMveliso zeMveliso,I-Bioproducts Medicine High Potency,Bioproducts Health Medicine
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: Iimveliso zeeMveliso zeMveliso zeMveliso,I-Bioproducts Medicine High Potency,Bioproducts Health Medicine
Home > Imveliso > I-Varicella Vaccine (Live) > Iimveliso ezigqityiweyo > Inkukhu yokukhusela i-Pox I-Pox vaccinated
Inkukhu yokukhusela i-Pox I-Pox vaccinated
 Inkukhu yokukhusela i-Pox I-Pox vaccinated
Iindlela zokuvelisa i-vaccine ziyaqhubeka. Amaseli e-mammalian ahlonyelwe kulindeleke ukuba abe luleke ngakumbi, xa kuthelekiswa nezinketho eziqhelekileyo ezinjengamaqanda enkukhu, ngenxa yemveliso eninzi kunye neziganeko eziphantsi kweengxaki zokungcola. Iteknoloji yokuxhamla evelisa i-vaccine ixiliswe ngokuchanekileyo ekutheni ikhule ekuthandeni ukuveliswa kwamagciwane okusebenzisa i-toxoids. Izitofu zokuxuba kulindeleke ukuba zinciphise ubuninzi bama-antigen eziqulethe, kwaye ngoko ukunciphisa ukusebenzisana okungathandekiyo, ngokusebenzisa iipatheni zamathambo ezinxulumene ne-pathogen . 
Ngo-2010, i-India ivelise iipesenti ezingama-60 zegciwane lokugonywa kwehlabathi elifanelekileyo malunga ne-$ 900 yezigidi (i-670 million yezigidi). 
Related Products List: Iimveliso zeeMveliso zeMveliso zeMveliso , I-Bioproducts Medicine High Potency , Bioproducts Health Medicine , Iimveliso zeeMveliso zeMpilo , Iimveliso zeeMveliso eziMgangatho oPhezulu , Iimveliso zeMpilo zeMpilo , Iimveliso zeMvelo eziNyelweyo , Iimveliso zeMvelo ziphelile iiMveliso eziPhezulu